ကင်းမျှော်စင် အွန်လိုင်း စာကြည့်တိုက်
ကင်းမျှော်စင် အွန်လိုင်း စာကြည့်တိုက်
မြန်မာ စာစောင်များ (၁၉၈၄-၂၀၂၁)
ဒီစာကြည့်တိုက်မှာ ယေဟောဝါသက်သေများရဲ့ စာပေတွေကို ဘာသာစကားမျိုးစုံနဲ့ ရှာဖွေလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
စာပေတွေကို ကူးယူဖို့ jw.org ကို ဝင်ကြည့်ပါ။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဧပြီ ၇
ခရစ်တော်​ယေရှုရဲ့ နောက်လိုက်​အနေ​နဲ့ ဘုရားတရား​ကိုင်းရှိုင်း​တဲ့ အသက်တာနဲ့ နေချင်​သူတိုင်းဟာ ညှဉ်းဆဲ​ခံရ​မှာပဲ။ —၂ တိ. ၃:၁၂။
၂၀၁၈ မှာ သတင်းကောင်း ကြေညာသူ ၂၂၃,၀၀၀ ကျော်​ဟာ ကျွန်တော်​တို့​ရဲ့ လုပ်ငန်း​ကို ကန့်သတ်​ပိတ်ပင်​ထား​တဲ့ နိုင်ငံ​တွေ​မှာ နေထိုင်ကြ​ရတယ်။ ဒါဟာ အံ့သြစရာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခရစ်ယာန်စစ်​တွေ​ဟာ နှိပ်စက်​ညှဉ်းပန်းမှု​ကို မျှော်လင့်​ထား​ကြတယ်။ ကျွန်တော်​တို့ ဘယ်​နေရာမှာပဲ နေထိုင်​ပါစေ အာဏာပိုင်တွေ​က ယေဟောဝါ​ကို ဆက်​ဝတ်မပြုဖို့ မမျှော်လင့်​ဘဲ ရုတ်တရက် ပိတ်ပင်​နိုင်တယ်။ အစိုးရ​က ဝတ်ပြုရေးကို ပိတ်ပင်​တဲ့​အခါ ကျွန်တော်​တို့ကို ဘုရား ကောင်းချီး မပေးတော့ဘူး​လို့ မှားယွင်းစွာ ကောက်ချက်​ချ​မိ​နိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ နှိပ်စက်​ညှဉ်းပန်းမှု​က ဘုရား​မျက်နှာသာ ဆုံးရှုံး​သွားတဲ့​သဘော မဟုတ်​ကြောင်း သတိရပါ။ တမန်​တော် ပေါလု​အကြောင်း စဉ်းစား​ကြည့်​ပါ။ ပေါလု​ဟာ ဘုရား​မျက်နှာသာ​ရထား​သူ ဖြစ်တယ်။ ခရစ်ယာန်​ဂရိ​ကျမ်း ၁၄ စောင်​ကို ရေး​ခွင့်​ရခဲ့ပြီး လူမျိုးခြား​တွေ​နဲ့​ဆိုင်​တဲ့ တမန်​တော် ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အပြင်းအထန် နှိပ်စက်​ညှဉ်းပန်း​ခံ​ခဲ့​ရတယ်။ (၂ ကော. ၁၁:၂၃-၂၇) သစ္စာရှိ​ကျေးကျွန်​တွေ နှိပ်စက်​ညှဉ်းပန်း​ခံရ​ဖို့ ယေဟောဝါ ခွင့်ပြု​ကြောင်း တမန်​တော်​ပေါလု​ရဲ့ ဖြစ်ရပ်​ကနေ သိရတယ်။ w19.07 ၈ ¶၁၊ ၃
ကျမ်းစာကို နေ့စဉ် ဆန်းစစ်ပါ—၂၀၂၁
ကြာသပတေးနေ့၊ ဧပြီ ၈
ကျွန်တော်​တို့​ဟာ . . .ကောင်းကင်​က နတ်ဆိုး​များစွာနဲ့ တိုက်ခိုက်​နေရ​တာ။—ဧ. ၆:၁၂။
ကျွန်တော်​တို့​အတွက် စိုးရိမ်​ကြောင်း ယေဟောဝါ ဖော်ပြ​တဲ့ နည်း​တစ်နည်းက​တော့ ရန်သူတွေကို တွန်းလှန်​ဖို့ ကူညီ​ပေးခြင်း ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်​တို့​ရဲ့ အဓိက ရန်သူဟာ စာတန်​နဲ့ နတ်ဆိုး​တွေ​ပဲ။ အဲဒီ​ရန်သူတွေ​အကြောင်း ယေဟောဝါ သတိပေး​ထား​တယ်။ သူတို့ကို တွန်းလှန်​နိုင်​ဖို့ လိုအပ်​တာတွေကို​လည်း ပေး​ထား​တယ်။ (ဧ. ၆:၁၀-၁၃) ယေဟောဝါ​ရဲ့ အကူအညီကို လက်ခံ​ပြီး ဘုရား​ကို အပြည့်အဝ အားကိုးမယ်​ဆိုရင် မာရ်နတ်ကို အောင်မြင်စွာ တွန်းလှန်​နိုင်​ပါ​လိမ့်မယ်။ “ဘုရားသခင်​သာ ကျွန်တော်​တို့​ဘက်မှာ ရှိရင် ကျွန်တော်​တို့ကို ဘယ်သူ ဆန့်ကျင်​နိုင်​မလဲ” လို့ ပြော​ခဲ့​တဲ့ တမန်တော် ပေါလု​လို ယုံကြည်​စိတ်ချမှု ရှိ​နိုင်​ပါ​တယ်။ (ရော. ၈:၃၁) ခရစ်ယာန်စစ်​တွေ​ဖြစ်​တဲ့ ကျွန်တော်​တို့​ဟာ စာတန်​နဲ့ နတ်ဆိုး​တွေ​အကြောင်း စိတ်မဝင်စား​ကြဘူး။ ယေဟောဝါ​အကြောင်း သင်ယူဖို့၊ အလိုတော်​ဆောင်​ဖို့​ပဲ အာရုံ​စိုက်​ကြတယ်။ (ဆာ. ၂၅:၅) ဒါပေမဲ့ စာတန်​သုံးတဲ့ နည်းတွေကို သိထားဖို့ လိုတယ်။ အဲဒါတွေကို သိ​မှ စာတန်​ရဲ့ ဉာဏ်​နီ​ဉာဏ်​နက်​တွေ​ကို ရှောင်နိုင်​မှာ ဖြစ်လို့ပဲ။—၂ ကော. ၂:၁၁။ w19.04 ၂၀ ¶၁-၂
သောကြာနေ့၊ ဧပြီ ၉
လူတိုင်းဟာ နားထောင်ဖို့ အမြဲ အသင့်​ဖြစ်နေရမယ်။ စကားပြော​တဲ့​အခါမှာ မစဉ်း​စား​မဆင်ခြင်ဘဲ မပြော​ရ​ဘူး။ —ယာ. ၁:၁၉။
စိတ်ဓာတ်ကျ​နေ​သူနဲ့ စကားပြော​တဲ့​အခါ သင် ကောင်းကောင်း နားထောင်ပေး​သလား။ ဘာမှ ပြန်​မပြော​ဘဲ ငြိမ်ငြိမ်လေး ထိုင်​နားထောင်​ရုံ​လောက်​ပဲ မဟုတ်ဘူး။ လိမ္မာ​ပါးနပ်​ပြီး ကြင်နာ​တဲ့​စကား​အားဖြင့် ကိုယ်ချင်းစာနာ​မှု၊ သနား​ကြင်နာ​မှု ပြ​နိုင်တယ်။ “တကယ် စိတ်မကောင်း​ပါဘူး” လို့ ပြော​နိုင်တယ်။ သူ့​ခံစား​ချက်​ကို အသေအချာ နားလည်အောင် မေးခွန်း​တစ်ခု နှစ်ခု မေး​နိုင်တယ်။ “ဘာကို ပြော​ချင်​တာလဲ။” ဒါမှ​မဟုတ် “ကျွန်တော်/မ​က ဒီလို​နားလည်တာ . . . အဲဒါ မှန်ရဲ့လား။” အဲဒီလို အသုံးအနှုန်းတွေ​က သင် တကယ် နားထောင်​နေကြောင်း၊ နားလည်အောင် ကြိုးစား​နေကြောင်း သူ့ကို စိတ်ချ​စေနိုင်​တယ်။ (၁ ကော. ၁၃:၄၊ ၇) “မစဉ်းစား​မဆင်ခြင်ဘဲ မပြော” ဖို့ သတိထား​ပါ။ အကြံပေး​ဖို့​ဖြစ်စေ၊ တစ်ဖက်သား​ရဲ့ အတွေးအခေါ်ကို ပြင်ပေး​ဖို့​ဖြစ်စေ ကြားဖြတ်​မပြောပါနဲ့။ စိတ်ရှည်ပါ။ ဖြေရှင်း​နည်း​တွေ ပြောပြ​မယ့်​အစား ကိုယ်ချင်းစာ​ကြောင်း၊ သနား​ကြင်နာ​ကြောင်း ဖော်ပြ​ပါ။—၁ ပေ. ၃:၈။ w19.05 ၁၇-၁၈ ¶၁၅-၁၇